RoboVac X80 na HomeVac H30, nzọ ọhụụ ọhụrụ sitere na eufy | Akụkọ ngwa
Ọkachamara ọkachamara na akpaaka ụlọ na nhọrọ maka eufy ụlọ ejikọtara ekpebiela ịbanye na ahịa oghere zuru oke na nhọrọ. RoboVac X80 ngwa ngwa nke ha na -akpọ igwe nhicha ikuku robot kacha elu n'ahịa, yana ihe nhicha oghere aka ha HomeVac H30, anyị ga -amata ha nke ọma na nkọwa na njirimara ọhụrụ ha.
1 RoboVac X80 ngwa ngwa
RoboVac X80 ngwa ngwa
RoboVac X80 ngwa ngwa bụ ihe nhicha ikuku robot nke mbụ nke ụwa gụnyere teknụzụ ikuku abụọ
tobaim, nke Ọ na -enye moto abụọ nke 2Pa nke ikike ịmịkọrọ. Nke a na -abawanye nrụgide siri ike nke robot, na -enwe ike melite mkpokọta ntutu anụ ụlọ site na 57,6% * n'otu oge oge ejiri rụọ ọrụ nke ọma nhicha ma dị irè n'otu ngafe. Site na ngwakọ RoboVac X80, enwere ike ịsachasị nke ọma site na ọrụ ya abụọ nke oghere na mopping n'otu oge. Ọnụ ojiji nke tank unyi ejirila 127% *mụbaa, na -eru
ike nke ihe ruru 600ml.
*> Ozi nke ika nyere
Ọnụ, iPath laser navigation na teknụzụ maapụ smart nwere nkwado
Amamịghe echiche (AI Map 2.0) mepụtara maapụ ụlọ nke ziri ezi nke na -enyere robot aka ịgbakọ a
usoro nhicha nke ọma karịa na -echefughị ​​akụkụ ọ bụla.
Nke abụọ n'ime akwụkwọ akụkọ nke eufy gosipụtara taa bụ ihe nhicha oghere mkpanaka aka HomeVac H30,
nke na-enye mgbanwe dị iche iche kwa ụbọchị. N'iji sistemụ ikike ya kachasị TriPower TM,
ọ dị mfe idobe gburugburu ebe dị ọcha, dị mma na enweghị ụdị allergens ọ bụla. Nhazi ya
kọmpat na fechaa, naanị 808 grams nke ibu, na -eme ka ọ dị mfe iji maka ogologo oge
oge mgbe ị na -azọpụta ohere maka tank unyi nke 250ml nke gunyere a
teknụzụ ncha uzuzu iji wepu ntutu dị nfe karịa.
Dabere na ngwugwu ahọrọ, HomeVac H30 nwere ike ịgụnye ngwa iji hichaa ụgbọ ala, a
motorized ahịhịa na -eme ka nhicha nke ntutu anụ ụlọ, na Ngwa ebighi ebi, ahịhịa maka
ala siri ike nke nwere ike ịmịpụ na mopping n'otu ngafe.
Modelsdị ọhụrụ a ga -adị maka ịzụta na Spain na ngwụsị Septemba na
Amazon. Ezinaụlọ RoboVac X80 na -amalite na € 499,99 na ụdị ngwakọ X80 ga -efu € 549,99.
HomeVac H30 nwere ọnụahịa mbido nke 159,99 XNUMX, nke dịgasị dabere na ụdị yana ngwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » RoboVac X80 na HomeVac H30, nzọ ọhụụ ọhụrụ sitere na eufy